Iinkampani zeBayer Shady PR: uFleishmanHillard, uKetchum, uFing Consulting -Ilungelo lase-US lokwazi
ezaposwa ngomhla Novemba 11, 2020 by UStacy Malkan
Kuthunyelwe kwasekuqaleni ngoMeyi 2019; Ukuhlaziywa ngoNovemba 2020
Kule posi, i-US Right to Know ilanda umkhondo wenkohliso kawonke-wonke obandakanya iifemu ze-PR ezikhulu zezoLimo iBayer AG neMonsanto abathembele kuzo kwimikhankaso yabo yokukhusela imveliso: Ukubonisana ne-FTI, uKetchum PR kunye noFleishmanHillard. Ezi femu baneembali ezinde zokusebenzisa amaqhinga akhohlisayo ukukhuthaza ii-ajenda zopolitiko zabaxhasi babo, kubandakanya neyeza lokubulala izitshabalalisi, icuba kunye nemikhankaso yokukhusela icandelo leoyile.
Ihlazo lakutsha nje
I-NYT ibhengeza ubuchule bokubonisana be-FTI ngokuqinileyo kwishishini leoyile: Kwi Ngomhla kaNovemba 11, 2020 inqaku leNew York Times, U-Hiroko Tabuchi utyhila indlela i-FTI Consulting "eye yanceda ngayo uyilo, abasebenzi kunye nemibutho kunye newebhusayithi ezixhaswa ngemali ziinkampani zamandla ezinokubonakala ngathi zimele inkxaso yamalinge e-fossil-fuel." Ngokusekwe kudliwanondlebe nabalishumi elinababini ababesebenza kwi-FTI kunye namakhulu amaxwebhu angaphakathi, u-Tabuchi unika ingxelo ngendlela i-FTI ebeka iliso ngayo kubaphembeleli bendalo, eqhuba amaphulo ezopolitiko e-astroturf, enabasebenzi beendaba ezimbini kunye neendawo zolwazi kwaye wabhala amanqaku e-pro-shishini malunga ne-fracking, amatyala emozulu kunye nokunye okushushu Imiba yeqhosha kwicala lase-Exxon Mobile.
IMonsanto kunye neefemu zayo ze-PR zenze iinzame zeGOP ukoyikisa abaphandi bomhlaza: U-Lee Fang uxele i-The Intercept Kwi-2019 kumaxwebhu aphakamisa ukuba abalawuli abachasene neMonsanto kunye noxinzelelo lokufaka uxinzelelo kuphando lwe-herbicide ehamba phambili emhlabeni, i-glyphosate. Ibali libika ngeendlela zobuqhetseba ze-PR, kubandakanya nendlela i-FTI Consulting eyabhala ngayo ileta malunga nesayensi ye-glyphosate etyikitywe yi-congressman ephezulu ye-GOP.
Amaxwebhu eMonsanto atyhila ubuchule bokujongela phantsi uphando lomdla woluntu: Amaxwebhu angaphakathi eMonsanto akhutshwe ngesimangalo ngo-Agasti 2019 abonisa uluhlu lweendlela zenkampani kunye neefemu zayo ze-PR ezisetyenziselwa ukujolisa kwiintatheli nakwabanye abachaphazeli abaphakamise inkxalabo malunga nezibulala-zinambuzane kunye nee-GMO, kwaye bazama ukuphikisa uphando kwimisebenzi yabo yi-US Ilungelo Lokwazi.
Kutyhilwe: njani 'indawo yezobuntlola' kaMonsanto ejolise kwiintatheli kunye nabaphembeleli, NguSam Levin, uMgcini (Guardian (8.8.2019)
Ndiyintatheli. IMonsanto yakha iqhinga ngenyathelo ngenyathelo lokutshabalalisa igama lam, NguCarey Gillam, uMgcini (8.9.2019)
Iphulo leMonsanto elichasene ne-US Ilungelo lokwazi: Jonga amaxwebhu (9.8.2019)
Jonga kwakhona iinyani zenyani ze-USRTK, esekwe kumaxwebhu afunyenwe kuphando lwethu, unika ingxelo kumaqabane eqela lesithathu ancedisa kukhuseleko kumzi-mveliso wokubulala izitshabalalisi: Ukulandelela iNethiwekhi yePropaganda yoShishino lweePilisi.
Nge-Meyi ka-2019, saxela kwizikrelemnqa ezininzi ezibandakanya iifemu ze-Bayer PR:
'Ifayile yeMonsanto' ihlazo
Iintatheli kwi U-Le Monde uxele ngoMeyi 9 ukuba bafumene "Ifayile yeMonsanto" eyenziwe yinkampani yonxibelelwano noluntu uFleishmanHillard edwelisa "ulwazi oluninzi" malunga ne-200 yeentatheli, abezopolitiko, izazinzulu kunye nabanye ababonwa ngathi banokuba nefuthe kwingxoxo ye-glyphosate eFrance. Le Monde wafaka isikhalazo Iofisi yomtshutshisi waseParis etyhola ukuba uxwebhu olo lubandakanya ukuqokelelwa ngokungekho mthethweni kunye nokulungiswa kwedatha, kukhuthaza iofisi yomtshutshisi ukuba vula inkqubo yolwaphulo-mthetho. Oku kubaluleke kakhulu kuba kubonisa ukuba kukho iindlela ezithile zokuvala amazwi anamandla. Ndiyabona ukuba bebezama ukundihlula, ” Owayengumphathiswa Wezendalo waseFrance uSegolene Royal, okuluhlu, uxelele iFrance 24 TV.
"Le yinto ebaluleke kakhulu kuba ibonisa ukuba kukho iindlela ezizizo zokuvala ilizwi elinamandla."
UFrancois Veillerette, osingqongileyo naye kuluhlu, uxelele iFrance 24 ukuba iqulethe iinkcukacha zonxibelelwano, izimvo kunye nenqanaba lokuzibandakanya ngokunxulumene neMonsanto. "Esi sisothuko esikhulu eFrance," utshilo. "Sicinga ukuba yinto eqhelekileyo le." U-Bayer uvumile ukuba uFleishmanHillard uzobe “'Uluhlu lokubukela 'lwamanani e-pro- okanye anti-pesticides”Kumazwe asixhenxe aseYurophu, ingxelo ye-AFP. Uluhlu luneenkcukacha malunga neentatheli, abezopolitiko kunye namanye amaqela anomdla. I-AFP ithe ifake isikhalazo kwi-arhente yolawulo yaseFrance kuba ezinye zeentatheli zayo bezikuluhlu olwavela eFrance.
Bayer waxolisa kwaye watsho bunqumamisa ubudlelwane bayo kunye namafemu abandakanyekayo, kubandakanya neFleishmanHillard kunye nabacebisi bakaPublicis, ngelixa kuqhubeka uphando. Eyona nto iphambili kuthi kukudala izinto elubala, Utshilo uBayer. "Asikunyamezeli ukungaziphathi kakuhle kwinkampani yethu." (Iifemu zacocwa kamva kukungaziphathi kakuhle ngumthetho oqeshwe yiBayer.)
Umtshutshisi waseFrance uvula uphando malunga nefayile ekrokrelwayo yeMonsanto, Reuters (5.10.19)
UBayer uthi iMonsanto inokuba igcine iifayile kubantu abanempembelelo kwiYurophu iphela, Reuters (5.13.20)
IMonsanto 'yaqulunqa idosi' kubachasi bezopolitiko, BBC (5.13. 20)
Ukubeka njengentatheli kwityala leMonsanto
Ukongeza kwiingxaki zeBayer PR, i-AFP yanika ingxelo ngoMeyi 18 ukuba umqeshwa wenye into "yolawulo lwentlekele" uqine ukuba isebenza neBayer neMonsanto Ukubonisana ne-FTI- kwabanjwa ukuzenza njengentatheli ezizimeleyo Kwilingo laseburhulumenteni eSan Francisco eliphele ngo Isigwebo se- $ 80 yezigidi ngokuchasene neBayer ngaphezulu kwengxaki yomhlaza we-glyphosate.
Umsebenzi we-FTI Consulting uSylvie Barak ubonwe encokola neentatheli malunga nemibono yamabali kwityala. Ubanga ukuba usebenzela i-BBC kwaye akazange achaze ukuba wayesebenzela inkampani ye-PR.
Umcebisi we-FTI ubeka njengentatheli kulingo lweMonsanto, I-AFP (5.18.19)
Iintlola zikaMonsanto: I-agri-chemical giant inembali egciniweyo yokusebenzisa amaqhinga amnyama ukuhlasela abagxeki kunye nefuthe kumajelo eendabaNguPaul Thacker, uHuffington Post (9.14.19)
I-Ketchum kunye neFleishmanHillard baleka i-GMO PR salvo
Ngo-2013, ishishini lezolimo lacofa uFleishmanHillard noKetchum, bobabini bangabanini bakaOmnicom, PR ekhubekisayo ukulungisa umfanekiso ye-GMO kunye nemveliso yokubulala izitshabalalisi. Kukhethwe iMonsanto I-FleishmanHillard ukuba "yenze ngokutsha" igama layo phakathi "kwenkcaso ekrakra" kukutya okuguqulweyo, ngokweNgxelo yeHolmes. Ngexesha elifanayo, uFleishmanHillard naye waba ngu Iarhente ye-PR yerekhodi yeBayer, kunye neBhunga loLwazi lweBiotechnology (i-CBI) -iqela lezorhwebo kuxhaswa ngemali Bayer (Monsanto), Corteva (DowDuPont), Syngenta kunye ne-BASF-baqesha inkampani yezobudlelwane noluntu yaseKetchum ukuze iphumeze umkhankaso wentengiso obizwa ngokuba ziiGMO Answers.
Amaqhinga okujikeleza aqeshwe zezi femu kubandakanya "wooing mama blogger"Kunye nokusebenzisa amazwi ekuthiwa" azimeleyo "kwiingcali"susa ukudideka nokungathembani”Malunga nee-GMO. Nangona kunjalo, ubungqina buvele ukuba iifemu ze-PR zihlele kwaye zabhala ezinye zeengcali "ezizimeleyo". Umzekelo, amaxwebhu afunyenwe yi-US Right to Know abonisa oko Kubhalwe uKetchum Izithuba zeGMO Iimpendulo ezazisayinwe ngu Unjingalwazi weYunivesithi yaseFlorida Ozibanga ezimeleyo njengoko wayesebenza emfihlekweni neMonsanto kwiiprojekthi ze-PR. Usekela-mongameli omkhulu kwiFleishmanHillard ihlelwe intetho a UC Davis uprofesa kwaye wamqeqesha indlela "yokuphumelela abantu egumbini" e Ingxoxo ye-IQ2 yokukholisa uluntu ukwamkela ii-GMOs. UKetchum naye wanika unjingalwazi amanqaku okuthetha Udliwanondlebe lonomathotholo malunga nophando lwesayensi.
Izifundiswa bezizezona zibalulekileyo kubathunywa kwimizamo yokuphembelela ukuchaswa kwelebheli ye-GMO INew York Times ngo-2015. "Oonjingalwazi / abaphandi / izazinzulu banomnqwazi omkhulu omhlophe kule mpikiswano kunye nenkxaso kumazwe abo, ukusuka kwezopolitiko ukuya kubavelisi," uBill Mashek, usekela-mongameli e-Ketchum, ubhalele unjingalwazi weYunivesithi yaseFlorida. "Qhubeka!" Iqela lezorhwebo le-CBI lichithe ngaphezulu kweedola ezili-11 yezigidi kwiiMpendulo zeGMO zikaKetchum ukusukela nge2013, ngokweerekhodi zerhafu.
Impendulo kulawulo lweengxaki zeempendulo ze-GMO
Njengomqondiso omnye wempumelelo njengesixhobo se-PR spin, Iimpendulo zeGMO zazinjalo Uluhlu olufutshane kuluhlu lweentengiso zeCIO ngo-2014 kudidi “lweCrisis Management & Issue Management.” Kule vidiyo ye-CLIO, uKetchum uqhayisa malunga nokuphindaphinda kabini ukujongwa kweendaba ze-GMO kunye "nokulinganisa i-80% yokunxibelelana" kwi-Twitter. Uninzi lwala manxibelelwano kwi-Intanethi avela kwiiakhawunti ezibonakala zizimele kwaye azichazi unxibelelwano lwabo kumkhankaso we-PR womzi mveliso.
Nangona ividiyo kaKetchum ibanga ukuba iimpendulo zeGMO ziya "kuchaza ukuqaqamba" ngolwazi oluvela kwiingcali "ezingenanto ihluziweyo okanye engacaciswanga, kwaye kungekho mazwi athulisiweyo," isicwangciso seMonsanto PR sicebisa ukuba inkampani ibalwe kwiimpendulo zeGMO ukunceda ukujikeleza iimveliso zayo ngendlela elungileyo. Inkqubo ye- uxwebhu ukusukela ngo-2015 Uluhlu lweempendulo zeGMO phakathi "kwamaqabane oshishino" oko kunokunceda ukukhusela i-Roundup kumbandela womhlaza; Kwicandelo "lezixhobo" kwiphepha le-4, isicwangciso sidwelise amakhonkco kwiGMO Answers ecaleni kwamaxwebhu eMonsanto anokunxibelelana nomyalezo wenkampani othi "iGlyphosate ayiyiyo i-carcinogenic."
Le vidiyo yeKetchum yathunyelwa kwiwebhusayithi ye-CLIO kwaye yasuswa emva kokuba siyibizile.
Ishishini laseSeedy: Kukuphi ukutya okuKhulu okufihliweyo ngephulo le-GMO PR, NguGary Ruskin, ingxelo ye-USRTK (2015)
Yintoni afana ngayo amashishini ezolimo kunye necuba: iifemu ze-PR, ukusebenza, amaqhinga, NguGary Ruskin, ingxelo ye-USRTK, Isahluko 4 (2015)
UHillard noKetchum: Iimbali zobuqhetseba
Kutheni nayiphi na inkampani ibeka iFleishmanHillard okanye uKetchum phambi kwemizamo yokukhuthaza ukuthembeka kunzima ukuyiqonda, ngenxa yeembali zabo zenkohliso ezibhaliweyo. Umzekelo:
Kude kube ngo-2016, uKetchum wayenguye PR eqinileyo yeRussia kunye neVladimir Putin. Ngoku ka amaxwebhu afunyenwe yiProPublica, U-Ketchum wabanjwa ebeka i-pro-Putin op-eds phantsi kwamagama "abaqeqeshi ababonakala bezimeleyo" kwiindawo ezahlukeneyo zeendaba. Ngo-2015, i Ukubandakanya urhulumente waseHonduran waqesha uKetchum ukuzama ukubuyisela kwisimo sayo emva kwesikrelemnqa sorhwaphilizo esigidi sezigidi.
Amaxwebhu avuza uMama uJones bonisa ukuba uKetchum wasebenza nenkampani yabucala yezokhuselo "eyayihlola iGreenpeace kunye neminye imibutho yezendalo ukusukela ngasekupheleni kweminyaka yoo-1990 ukuya kuthi ga ngo-2000, bephanga amaxwebhu asuka kwimigqomo yenkunkuma, bezama ukutyala abasebenzi abasebenza ngokufihlakeleyo phakathi kwamaqela, ukufaka iiofisi, ukuqokelela iirekhodi zeefowuni zabaphembeleli, nokungena kwiintlanganiso eziyimfihlo. ” UHillard wabanjwa esebenzisa iindlela zokuziphatha ezingekho semthethweni ngokuchasene nempilo yoluntu kunye nabameli bolawulo lwecuba egameni lenkampani yecuba uRJ Reynolds, ngokophando olwenziwe nguRuth Malone kwi Ijenali yaseMelika yezeMpilo yoLuntu. Ifemu ye-PR yade yabhala ngokufihlakeleyo iintlanganiso zolawulo lwecuba kunye neenkomfa.
UHillard wayenjalo inkampani yobudlelwane noluntu kwiZiko leCuba, umbutho wecuba wokucenga umbutho, kangangeminyaka esixhenxe. Kwinqaku leWashington Post lango-1996, uMorton Mintz wabalisa ibali malunga nendlela uFleishmanHillard kunye neZiko lecuba abaliguqule ngayo iZiko leZempilo elisempilweni laba liqela eliphambili kwishishini lecuba kwimizamo yalo yokuphelisa inkxalabo yoluntu ngobungozi bokutshaya. Ketchum ikwasebenzele nomzi mveliso wecuba.
Zombini ezi femu ziye zasebenza ngamanye amaxesha omcimbi. UHillard ubenjalo kuqeshwe amaphulo okulwa ukutshaya. Ngo-2017, uKetchum wasungula i spin-off firm ebizwa Hlakulela ukwenza imali kwimarike yokutya ekhulayo, nangona i-GMO Answers zikaKetchum zikuhlazisile ukutya okuphilayo, zibanga ukuba abathengi bahlawula "ipremiyamu ephezulu" yokutya okungangcono kunokutya okulinywa ngokwesiqhelo.
I-Black Ops, amaqela aGreen, Kutheni le nto inkampani yabucala yezokhuseleko ihlola iGreenpeace kunye nezinye iimpahla zendalo?NguJames Ridgeway, uMama Jones (4.11.2008)
Ukusuka eRussia nge-PR: Amagqabantshintshi abhalwe ziingcali ezibonakala ngathi zizimeleyo abekwa egameni likarhulumente waseRussia yinkampani yakhe ye-PR, uKetchumNguJustin Elliot, ProPublica (9.12.13)
Ukubonisana ne-FTI: ukukhohliswa kwemozulu kunye nolwalamano oluninzi lwecuba
Ukubonisana ne-FTI, "ulawulo lweengxaki" PR eqinile esebenza neBayer nomsebenzi wakhe wabanjwa ezenza intatheli Kwilingo lakutsha nje lomhlaza we-Roundup eSan Francisco, wabelana ngokufana okuninzi kunye noFleishmanHillard noKetchum, kubandakanya nokusetyenziswa kweendlela zokufihla, ukungabikho kokucaca kunye nembali yokusebenza nomzi mveliso wecuba.
Ifemi yaziwa njengomdlali ophambili kwimizamo ye-ExxonMobil yokuphepha uxanduva lokutshintsha kwemozulu. Njengo-Elana Schor noAndrew Restuccia ixelwe kwi-Politico ngo-2016:
Ngaphandle kwe [Exxon] uqobo lwayo, eyona nto iphikisayo kwimifuno ivela kwi-FTI Consulting, inkampani egcwaliswe ngabantu ababesakuba ngabancedisi beRiphabhlikhi abathe banceda ukumanyanisa i-GOP ekukhuseleni i-fuels. Ngaphantsi kwesibhengezo saMandla kwiNzulu, iprojekhthi eyenzela i-Independent Petroleum Association of America, i-FTI iye yaxuba iintatheli ngee-imeyile ezithi "ukusebenzisana" phakathi kwamatshantliziyo aluhlaza kunye nee-AGs zikarhulumente, kwaye iphakamise imibuzo malunga nezibonelelo ze-InsideClimate's Rockefeller. "
Abasebenzi be-FTI Consulting babekhe babanjwa bezenza iintatheli ngaphambili. UKaren Savage uxele NgoJanuwari 2019 kwiiNdaba zoTyala ngemozulu, "Abacwangcisi bobudlelwane boluntu ababini abamele i-Exxon kutsha nje bazenze njengeentatheli kwilinge lodliwanondlebe elimele uluntu lwaseColorado olumangalela i-Exxon ngomonakalo onxulumene notshintsho lwemozulu. Abacwangcisi bobuchule — uMichael Sandoval kunye noMatt Dempsey — baqeshwe yi-FTI Consulting, inkampani ekudala inxulumene nomzi mveliso weoyile negesi. ” Ngokweendaba zeTyala leMozulu, la madoda mabini adweliswa njengababhali beWestern Wire, iwebhusayithi eqhutywa yiminqweno yeoyile kwaye inabasebenzi beengcali ezivela kwi-FTI Consulting, ekwabonelela abasebenzi kwi-Energy In Depth, ipetroli yamandla ombane “uphando, imfundo kunye iphulo lokufikelela eluntwini. ”
Amandla Obunzulu aziveza njengo "mama kunye nevenkile ye pop" emele ababoneleli bamandla amancinci kodwa yadalwa ziinkampani ezinkulu zeoyile kunye negesi ukuphembelela ukupheliswa, I-DeSmog blog ibikwe kwi-2011. Iqela leGreenpeace lityhile i Iimemo zeshishini zika-2009 ezichazayo Amandla Ezobunzulu “njengephulo elitsha kushishino ngokubanzi… ukulwa nemigaqo emitsha yokusingqongileyo, ingakumbi ngokubhekisele kuqhekeko lombane oluhamba ngesanti kubunzulu baphantsi” “obungenakwenzeka ngaphandle kokuzibophelela kwezezimali kwangethuba” kwiminqweno ephambili yeoyile negesi kubandakanya iBP, iHalliburton, iChevron, I-Shell, i-XTO Energy (ngoku eye-ExxonMobil).
Enye into efana nayo yonke le mveliso ziimveliso zecuba. I-FTI Consulting "inembali ende yokusebenza nomzi mveliso wecuba," ngokuka Amacandelo oTuba.org. Ukukhangela kwithala leencwadi lamaXwebhu e-UCSF izisa amaxwebhu angaphezu kwama-2,400 XNUMX ngokunxulumene nokubonisana ne-FTI.
I-Exxon iyabhuduzela iqulethe ikhuselo lemozulu, Kwezopolitiko (5.9.2016)
Abaphenyi be-FTI babonakala njengeentatheli ukuya kubuza igqwetha elikhokela ityala lezolimo ngokuchasene nenkampani, Idokodo lemozulu (1.21.19)
Ingxelo engaphezulu kwizikrelemnqa zikaBayer PR
Ifayile yeMonsanto: Uninzi lwabantu luhlelwe ngokungekho mthethweni ngokwemiqathango yabo kwi-glyphosate, nguStéphane Foucart noStéphane Horel, Le Monde (5.9.19).
Ifayile yeMonsanto: Izikhalazo zeHlabathiNguLuc Bronner, Le Monde (5.9.19)
I-Monsanto yokwahlula ubuntu ngokokuma kwabo kwi-glyphosate, NguSébastien Sabiron, France 2 TV, (5.10.19)
Ukurhanelwa kobhaliso olungekho mthethweni nguMonsanto: uphando oluvulekileyo lwezomthetho kunye nezikhalazo ezitsha xa kulungiselelwa, ”NguLe Monde kunye ne-AFP (5.11.19)
Ividiyo evela eFrance 2 ngeempendulo ezivela kubantu abadweliswe kwiFayile yeMonsanto
Ingxoxo yeFrance 24 noCarey Gillam, Nina Holland, uFrancois Veillerette kunye UKavin Senapathy
IiLiso zomthetho zikaBayer zonyuka ngokuKhangela kwiFayile yeMonsanto, ”NguRuth Bender, kwiWall Street Journal (5.13.19)
UBayer unqumamisa ubudlelwane beArhente ebesalinde uphando lweMonsanto, ”NguArun Sudhamen, Ingxelo kaHolmes (5.13.19)
U-Bayer uyaxolisa kuluhlu olufihlakeleyo lwabagxeki beMonsanto, UDeutsche Welle (5.12.19)
Ukutya kwengqondo, GMO, Pesticides I-BASF, Bayer, UBill Mashek, CBI, Corteva, IBhunga leNgcaciso yeBiotechnology, DowDuPont, Amandla kubunzulu, ExxonMobil, UmfundiHillard, IFransi 24 iTV, UFrancois Veillerette, Ukubonisana ngeFTI, Iimpendulo zeGMO, UKetchum, Le Monde, UMat Dempsey, UMIchael Sandoval, IMonsanto, Ifayile yeMonsanto, I-Omnicom, Abacebisi bePublicis, Faka phakathi, URJ Reynolds, USegolene Royal, ISyngenta, IZiko lecuba, Yunivesithi yaseFlorida
Amaphepha eMonsanto-Iimfihlo eziBulalayo, urhwaphilizo lwendibaniselwano, kunye nokuKhangelwa kweNdoda enye kuLuntu
Matshi 1, 2021
Kutheni silanda izicwangciso zeBill Gates zokuphinda sisebenzise iinkqubo zethu zokutya
Izicwangciso zikaBill Gates zokuphinda zisebenzise iinkqubo zokutya ziya kuyonakalisa imozulu
Februwari 25, 2021
Uvavanyo lwe-EPA lweekhemikhali lutsala ukugxeka kwizazinzulu zalo
Februwari 24, 2021
Februwari 15, 2021